Zvinyorwa zveBill Chirungu pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Bill Chirungu
Chishanu, February 19, 2010 Svondo, June 28, 2015 Bill Chirungu
Kuverengeka kugona iko kugona kwemunhu kuverenga ndima yechinyorwa uye kunzwisisa uye kuyeuka zvavakangoverenga. Heano mamwe matipi ekuvandudza kuverenga, kuratidzira, uye kuratidza kwekunyora kwako pawebhu. 1. Nyora ZveWebhu Kuverenga pawebhu hakusi nyore. Makomputa monitors vane yakaderera screen resolution, uye yavo yakaratidzirwa mwenje inokurumidza inoita kuti maziso edu anete. Uyezve, mazhinji mawebhusaiti uye zvinoshandiswa zvinovakwa nevanhu